From Up on Poppy Hill (2011) ဒီကားကတော့ 2011 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး 1963 ခုနှစ် ယိုကိုဟားမားကို အခြေပြုရိုက်ကူးထားပါတယ်.. ဒီကားရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးစရာ သီချင်းနောက်ခံလေးတွေ တော်တော်များများပါရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်.. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Umi ဆိုတဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးနဲ့ Shun ဆိုတဲ့ကောင်လေးတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်.. Umi ဟာ အဖေဆုံးသွားပြီးနောက် အလုပ်များလွန်းတဲ့အမေနဲ့လဲ အတူမနေနိုင်ဘဲ အဖွားအိမ်မှာနေထိုင်ရတဲ့ လူကြီးဆန်ဆန်ရင့်ကျက်လှတဲ့ကောင်မလေးပါ.. သူ့အကျင့်ကတော့ အိမ်ရှေ့မှာ အမြဲတမ်း အလံလေးတွေ လွှင့်ထူထားတတ်တာပါပဲ... သူ့ညီမလေးကတော့ အလှအပမက်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်ပီပီ စိတ်ကစားလွယ်လွန်းတဲ့ကလေးမလေး.. အဲဒီညီမလေးကြောင့်ပဲ Hero ဆန်ဆန် ရဲရင့်တည်ကြည်ပြီး အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်တတ်တဲ့ Shun နဲ့ စတင်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်.. သူတို့ကျောင်းမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာကလပ်အဖွဲ့တွေ စုဝေးနေထိုင်တဲ့ Latin Quarter ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခု ရှိပါတယ်.. ကလပ်အဖွဲ့ဆိုတာကလဲ သင်္ချာကလပ်.. ဒဿနိကကလပ်.. ဓာတုဗေဒကလပ်.. ကဗျာကလပ်စသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားတို့ရဲ့ အိမ်မက်တည်ရာ သူတို့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာ... ခက်တာက ...
IMDB: 7.4/10 20,854 votes
Rudolf the Black Cat (2016) ဒီတစ်ခါတော့အကောင်းဆုံးဂျပန်ကာတွန်းကားလေးတစ် ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အတော်ကောင်းပြီးကျွန် တော်အတော်ကြိုက်မိတဲ့ကားလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး ဇတ်ကားစလယ်ဆုံးပရိတ်သတ်တွေကိုဆွဲဆောင်သွား မယ့်ဇတ်ကားလို့ပြောရင်မလွန်ပါဘူးဒီဇတ်ကားလေးမှာ ဇတ်လိုက်ကျော်ကြီးကတော့ကြောင်ကလေးယူဒေါ့ပါပဲ ဂီဖုကနေမတော်တဆကားမှားစီးရာကတိုကျိူကိုရောက် ရှိသွားတဲ့ကြောင်ကလေးယူဒေါ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုတဝ ကြီးကြည့်ရှုရမှာပါယူဒေါ့လေးတိုကျိူမှာဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်မလဲကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲယူဒေါ့တစ် ယောက်ဖိုးရှုပ်ဆိုတဲ့ကြောင်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကြောင် ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုပြန်နိင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ယူ ဒေါ့လေးကိုပရိတ်သတ်တွေသနားပြီးချစ်ကြမှာအသေအချာပါပဲမိမိအိမ်ကိုပြန်နိင်ဖို့ဂျပန်စာကြိုးစားသင်ယူတဲ့ ယူဒေါ့လေးရဲ့စိတ်ဓါတ်ကလည်းလေးစားစရာပါမိမိ ထက်အသက်ငယ်သူကိုသနားကြင်နာစွာစောင့်ရှောက် တဲ့ဖိုးရူပ်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ဟာလည်းအတုယူစရာပါယူဒေါ့တစ် ယောက်မိမိရဲ့နေရပ်ကိုပြန်ရောက်နိင်မလားဘယ်လို တွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ပရိတ်သတ်တွေစောင့် ကြည့်ကြပါဒီဇတ်ကားဟာသာမန်ကာတွန်းကားလေး တစ်ကားလို့ကျွန်တော်တော့မထင်မိပါဘူးဘာတွေပဲကြုံ ကြုံကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးစာကိုလည်းကြိုးစား သင်ယူတဲ့ယူဒေါ့လေးရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုကလေးလေးတွေအတုယူဖွယ်ရိုက်ကူးပြထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်လူသားချင်းမဆိုထားနဲ့တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်းတောင်ညှာတာသနားကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကလည်းလေးစားစရာပါသားသားမီးမီးလေးတို့သာမကသားသားမီးမီးတို့ရဲ့ဖေဖေမေမေတို့ပါအတူတူကြည့်သင့်တဲ့ဇတ်ကား ဖြစ်ပြီးကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကိုမြင့်တင်ပေး နိင်ပြီးတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဇတ်ကားလေးပါလို့နိဂုံးချူပ်ရင်းဘေကုန်ရကျိူးနပ် မယ့်ဇတ်ကားတစ်ကားလို့ညွန်းချင်ပါတယ်Download And Watch From V.I.P Download Large File From Pcloud Download Small File From Media Link
Journey to Agartha (2011) ဒီကားဟာ လတ်တလောလူကြိုက်များနေတဲ့ Kimi no Nawa ( YourName ) ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Makoto Shinkai ရဲ့ ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပါ.. 2011 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇကာတင်ဆု ၆ ခုနဲ့ 2012 Tokyo Anime Award ၁ ခု ရရှိခဲ့တဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်... Shinkai ဟာ ကာတွန်းလောကမှာ တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် ထင်ရှားသလို.. သူ့ကားတွေကလဲ အရောင်အသွေးလှပညီညွတ်မှု... အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်မှု.. ဆန်းကြယ်တဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တို့ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်... ဒီကားမှာတော့ Asuna နဲ့သူ့ဆရာဟာ သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ ချစ်ရသူတွေကို မြေအောက်ကမ္ဘာထဲအထိ သွားရောက်ရှာဖွေတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်... ဇာတ်လမ်းရဲ့ အလှည့်အပြောင်းအပြင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားပုံက သာမာန်မဟုတ်တာမို့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုတော့ မရေးတော့ပါဘူး... သေချာတာကတော့ အပြင်ကမ္ဘာနဲ့မတူတဲ့ နောက်ခံရှုခင်းတွေ... ကြည်ပြီးပြတ်သားတဲ့အရောင်တွေ... အလင်းအမှောင်တွေနဲ့ ထူးဆန်းပြီးဆွဲငင်မှုရှိတဲ့ ...
Tarzan2(2005) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMdb rating 5.6 ရထားတဲ့ Animation ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Disney ရဲ့လက်ရာကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှု့မိသူတွေအတွက် မက်ဆေ့တွေ တစ်ပုံကြီးပေးထားပါတယ်။ တာဇံ တစ်ယောက်တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ oက်oံတွေနဲ့ အခက်ခဲတွေကို အတူကျော်ဖြတ်လာပြီး လူမှန်းသိတက်စ အရွယ်လဲရောက်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်မိလာပါတယ်။ လူရယ်ဆိုပေမဲ့ လူမမြင်ဘူးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် သူ့ပတ်oန်းကျင်က တိရိစ္ဆာန်တွေကိုပဲ အတုယူကျင့်ကြံအားကျနေမိပါတယ်။ တစ်နေ့ သူ့ဘoတစ်ဆစ်ချိုးမှာ oက်oံမိသားစုနဲ့အတူ ခရီးသွားရင်း ချောက်ကြီးထဲကိုကျသွားပါတယ်.. အဲဒီနောက် တာဇံတစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်လက်ရုန်းကန်ပြီး ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရသွားမလားဆိုတာကို ပုရိတ်သတ်ကြီးကပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့လိုက်ပါလို့ပြောပါရစေ... (ဘာသာပြန်သူကတော့ စိုးရာဇာ ပဲဖြစ်ပါတယ်) File Size : 500 MB Quality : 720P Web Rip Running Time : 1hr 12minutes Format : Mp4 Genre : Animation, Adventure, Comedy Encoder : Thanhtike Zaw
IMDB: 5.6/10 6,124 votes
The Road Runner Show (1966–1973) 90's Kid တွေ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ Coyote ဆိုတဲ့ မြေခွေး နဲ့ Road Runner ဆိုတဲ့ အပြေးသန်တဲ့ ကြက်ကလေး တို့ရဲ့ အရမ်းရယ်ရတဲ့ The Road Runner Show ကို အပိုင်းရှိသမျှ လက်လှမ်းမှီသမျှ အကုန်ပြန်စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... နောက်လဲ ဒီလို Animation Show တစ်ချို့ကို ထပ်တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ် မမေ့သေးတဲ့ 90's Kid တွေ ရှိအုံးမယ် ထင်ပါတယ်...ကဲ ဆက်ကြည့်ပြီး ရယ်လိုက်ကြပါအုံး...Thit San KhantDownload List ============= EP 01 Ep 02 EP 03 EP 04 EP 05 EP 06 Ep 07 EP 08 EP 09 EP 10
IMDB: 8.1/10 4,097 votes
Atlantis: The Lost Empire (2001) Atlantis: The Lost Empire ဆိုတဲ့ Animation ကားလေးက Disney ရဲ့ ပထမဆုံးသော Adventure/Sci-Fi အမျိုးအစား Film ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Tob Murphy ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ Gary Trousdale နဲ့ Kirk Wise တို့က ပူးတွဲရိုက်ကူးကာ Don Hahn ကနေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ခံစကားပြော အနေနဲ့ကတော့ Michael J. Fox, Cree Summer, James Garner, Leonard Nimoy, Don Novello, Phil Morris, Claudia Christian, Jacqueline Obrandors နဲ့ Jim Varney တို့ကနေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ပေးထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Jim Varney အနေနဲ့ကလည်း ...
Gantz:O (2016) Gantz: O (2016)_____IMDb - 7.1/10ကဲ အခုတခါတော့အနျနီမေးရှငျးပရိတျသတျတှေ အတှကျ၂၀၁၆နှဈကုနျလောကျမှာထှကျခဲ့တဲ့ ဇတျကားတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျအတျော လညျးနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ဇတျကားတဈကားပါပရိတျသတျ တှအေကွိုကျတှမေ့ယျလို့လညျးမြျောလငျ့ပါတယျ သူတဈပါးကိုအမွဲကူညီတတျတဲ့ကတိုဆိုတဲ့လူငယျလေးတဈယောကျ တဈနလေူ့တဈယောကျကိုကူညီရငျးသဆေုံးသှားတဲ့အခါမှာ ဘာဆကျဖွဈမလဲကိုယျ့ကိုကိုသပွေီလို့ထငျထားတဲ့ ကတိုတဈယောကျတကယျတနျးမသသေေးပဲအခနျးလေးတဈခနျးကို ရောကျရှိသှားတဲ့အခါမှာဘာဆကျဖွဈမလဲအခနျးလေးထဲက လူတှကေကောဘယျသူတှလေဲမိမိမူလဘဝကိုပွနျရောကျဖို့ဂနျးဆိုတဲ့ကစား ပှဲတဈပှဲကိုကတိုကစားရတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုစခနျးသှားမလဲမိမိတို့ရဲ့ကစားပှဲဟာထငျသလို မလှယျကူပဲလူ့ဘီလူးကွီးတှနေဲ့တိုကျခိုကျရတဲ့အခါမှာ ကောကတိုတို့အုပျစုအလှယျတကူတိုကျခိုကျနိငျမှာလား ကစားပှဲအပွငျကိုပွနျရောကျနိငျပါ့မလား ဒီဇတျကားကိုကွညျ့ရငျးဂပြနျတှရေဲ့ရုပျရှငျပညာအရညျအသှေးကို သိသိသာသာမွငျနိငျပါတယျတိုကြိူလို အိုဆာကာလိုနရောမြိုးကိုတသှမေတိမျးတူအောငျ ဖနျတီးနိငျတဲ့ကှနျပွူတာပညာကိုတော့အတျော လေးစားမိပါတယျလူနဲ့အတျောလေးလညျးတူအောငျပွုလုပျထားတဲ့ အတှကျပရိတျသတျတှအေကွိုကျ တှေ့ဦးမယျလို့ကြှနျတျောရဲရဲကွီးအာမခံပါတယျ ကြှနျတျောပွောသလိုဟုတျမဟုတျဆိုတာကတော့ဒေါငျး ကွညျ့ပွီးမှဆုံးဖွတျကွပါလို့ပွောကွားရငျးကွညျ့လိုကျကွပါဦးလို့ (ဇာတျကားအညှနျး နဲ့ ဘာသာပွနျကတော့ ကိုစိုးထှေးပါ)
Supernatural: The Animation Supernatural ကို TV Series ကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက် အရသာ တစ်မျိုး မတူပေးမယ့် Animation TV Series တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ... ပုံမှန် ဇတ်လမ်းတွဲတွေနှင့် ကျောရိုးတူမယောင် နှင့် ကွဲထွက်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ရှိပြီး Animation ကြိုက်သူတွေရော SN ချစ်သူတွေပါ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေမယ့် ဇတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ် အပိုင်းအားဖြင့် ၂၀ ကျော်ပဲ ရှိပါတယ်... ဒီ Animation ဇတ်လမ်းတွဲမှာ Sam အဖြစ် Jared Padalecki ကိုယ်တိုင် အသံသရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်.. လက်ရှိပြနေတဲ့ Supernatural Season 12 ကိုလဲ စောင့်မျှော်ရင်း ဒီ Animation Series လေးကိုလဲ အားပေးကြပါအုံး... ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tariq L Walker ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...Supernatural the Animation S01 E01
IMDB: 7.6/10 1,350 votes
Throne of Elves (2016) ဒီကားလေးက ပထမထွက်ရှိထားတဲ့ Dragon Nest: Warrior's Dawn ရဲ့အဆက် ဒုတိယကားဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးမပြောခင် movie version လေးအကြောင်းပြောပါရစေကျွန်တော်တို့ ပထမတင်ပေးခဲ့တာက english version ဖြစ်ပြီး အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ chinese version ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...version မတူတဲ့အတွက် ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ နာမည်ဟာ နတ်သူငယ်မလေး လီယာ(Liya)ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေမတူကြပါဘူး.. .(ဥပမာ eng ver: Lambert = Chinese ver: Xiao Yu) ဒါလေးတစ်ခုတော့ သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ ပထမဇာတ်ကားရဲ့ နဂါးတိုက်ပွဲအပြီး အားလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန် ရှောင်ယူ(လမ်းဘာတ့်) နဲ့ နတ်သူငယ်မလေး လီယာတို့နှစ်ယောက်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မေတ္တမျှနေကြပြီ... သို့သော်လည်း နေရာဒေသဝေးကွာတဲ့အခြေအနေကြောင့် တွေ့ကြရဖို့တော့ မလွယ်ကြ.. .တစ်နေ့ ကံကြမ္မာမျက်နာသာပေးလို့ သူတို့နှစ်ယောက် ဆုံတွေ့ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေရဲ့...ဒီအချိန် နတ်သူငယ်တိုင်းပြည်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့ အမှောင်လောကဘက်တော်သား နတ်သူမတစ်ယောက်က ကြိုးစားအားထုတ်လာတဲ့အခါမှာတော့.... နတ်သူငယ်ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ဖို့ သူ ဘယ်လိုတွေလုပ်မှာလဲ? လီယာတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုကြပါကုန်... ဒီကားမှာတော့ နတ်သူငယ်မလေးတွေ အရင်ထက် ပိုချော ပိုချစ်စရာကောင်းလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ် ကောင်းမွန်တဲ့ Animation ပြုလုပ်ချက်တွေကြောင့်လည်း ကြည့်ရှူရတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် သဘောကျစေမှာပါ... ဒါကြောင့် ...
Iron man & Captain America: Hero United (2014) ဟေး....Cap fan တို့...အကယ်၍များ သင်တို့ချစ်တဲ့ Cap ကြီးဟာ Hydra ဖက်က ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကော....??? ဟိုတစ်လောက Cap ကြီးကို Hydra Suit နဲ့ မြင်လိုက်ကြမှာပါ။ CW ထွက်ပြီး သိပ်မကြာလိုက်ဘူးလေ။ အဲ့တုန်းက အတော်လေးကို ဂယက်ထသွားသေးတယ်နော... ခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Animation လေးကတော့ 2014 တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Iron Man & Captain America: Heros United ပါ... ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Cap ကို Red Skull ရဲ့ ဘက်တော်သား Hydra တစ်ဖြစ်လဲနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဇတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Red Skull နဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ပါးစေ Taskmaster တို့ရဲ့ မဟာစီမံကိန်းကြီးကို Cap နဲ့ Iron Man တို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အကြောင်းပါ... ကမ္ဘာကြီးကို Hydra အထူးသုတ်သင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ အပိုင်စီးမယ့် စီမံကိန်း ဆိုပါတော့။ ထုံးစံအတိုင်း မတည့်အတူနေ အချစ်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Cap နဲ့ ...
IMDB: 5.6/10 1,019 votes
Iron man & Captain America: Hero United (2014)
DC Superhero Girls: Hero of The Year 2016 ၂၀၁၆ ထွက် Animation ကောင်းလေးတစ်ခု တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အချစ်တော် Superheroes တွေ ရဲ့ မျိုးဆက်လေးတွေ ကျောင်းတက်ရင်း စွန့်စားခန်းဖွင့်ကြပုံပါ။ Dark Opal က မဟာလက်နက်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးဖို့စူပါဟီးရိုးတွေရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပစ္စည်းတွေကို ခိုးယူသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာ....File Size : 500/250 Mb Duration : 1: 16: 24 Quality : Bluray 720p Translator : San Thu Aung Encoder : Littleneo pCloud Link(500Mb) Small File Size(250Mb) Op Link Vip Link
The Guardian Brothers (2016) ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေဟာ မှိုတက်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ် နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဆိုတာ ပုံပြင်ထဲမှာတောင်မရှိတော့တဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း .....လူတွေဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကို နတ်တွေက သဘောမကျဘူး အထူးသဖြင့် တံခါးစောင့်နတ်သားလေး ၂ပါးက ပိုဆိုးတယ် သို့ပေမဲ့လည်း ဒေါသထွက်ရုံမှာအပသူတို့ ဒီဖြစ်အင်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတယ်. တစ်နေ့တော့ သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ပုံကိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အိုကြီးကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့မိတယ် တံခါးစောင့် နတ်သား၂ယောက်ဟာ လူ့ပြည်ကိုဆင်းကာ စားသောက်ဆိုင်လေးကအစပြုပြီး လူတွေရဲ့အယူအဆတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားကြတယ် ဒီစားသောက်ဆိုင်လေး ကမုဆိုးမသားအမိ၂ယောက်ရဲ့ဆိုင်လေးပါ လူယောင်ဆောင်လာတဲ့နတ်သား၂ယောက်ရယ် သားအမိရယ် စားသောက်ဆေးလေးမှာအလွဲလွဲအချောချောတွေနဲ့ ...........နတ်သားလေး၂ယောက်ဟာတကယ်ပဲ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မလား ဘယ်လိုအန္တရယ်ဆိုးတွေနဲ့ ရောကြုံရမလဲဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေကြည့်လိုက်ပါဦးလို့....... ဒီဇတ်ကားလေးကိုကြည့်ရင်း အာရုံကိုလွှမ်းမိုးလာတာက ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ သာသနာသက္ကရာဇ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ သာသနာသက္ကရာဇ် ၃၀၀၀ကျော်ခဲ့ရင် လူတွေဟာအယူအဆလွဲမှားမှုတွေနဲ့ ပျက်ကိန်းဆိုက်မယ်လို့ ဆိုထားတာပါ ဒီဇတ်ကားလေးထဲမှာ ဆိုရင်လူတွေဟာ ခတ်မှီစက်ကိရိယာတွေ နည်းစနည်တွေ စည်းကမ်းတွေလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ပျော်မွေ့နေလေတော့ ဘာသာရေးလိုက်စားမှု ဆိုတာမရှိသလော က်ဖြစ်နေတယ် ဇတ်ကားကျောရိုးက ပိုပိုသာသာလေးပြထားတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်အပြင်လောကနဲ့ဆက်စပ်ကြည့်တော့ တော်တော်လေးလည်းမှန်နေတယ် ကောင်းမွန်တဲ့နိမိတ်ပြဇတ်ကားလေးလို့ တောင်ဆိုရမယ်ထင်တယ် ကိုင်းရေးတာလည်းရှည်ပြီဗျာ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးလို့Download From V.I.P Download Large File From PcloudDownload Small File From Pcloud
Justice League Dark 2017 Justice league dark ဟာ အရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Justice league movies တွေနဲ့မတူဘဲ title အတိုင်းပဲ Dark ဆန်ပါတယ် R-rated ဖြစ်ပြီး rating 7.2 ရှိပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်ငါးရာတုန်းက မှော်ဆရာ Destiny ဟာ အိပ်မက်ကျောက်တုံး(Dreamstone) ကိုသုံးပြီး ကမ္ဘာမြေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မှော်ဆရာမာလင်ကြောင့် မအောင်မြင်ဘဲ ကျောက်တုံးထဲမှာ Destiny ဟာ ပိတ်မိ နေပါတယ် ယခုအချိန်မှာ သူဟာ အနှစ်ငါးရာကြာ အောင် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကိုတစ်ဖန် ပြန်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံပါတယ် Justice League ရဲ့ မူလအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Superman Wonderman Flash Green Lantern တို့ဟာ မှော်ပညာကို မကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အခါမှာ Batman ဟာ မှော်ပညာကို ...
Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) ဒီကားလေးကတော့ အားလုံးနဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတဲ့ Gerfield 1 ရဲ့အဆကျဖွဈတဲ့ Gerfield2ပဲဖွဈပါတယျ... Gerfield ဆိုတဲ့နာမညျကိုကွားလိုကျရငျ အရမျးကိုလညျပွီးကွောငျပါးဝတတျတဲ့ လိမ်မျောရောငျကွောငျဖကျတီးကို ပွေးမွငျကွမှာပဲဖွဈပါတယျ...သူ့ရဲ့စကားပွောဟနျတှနေဲ့ ဝနတေဲ့ သူ့ကိုယျလုံးကွီးက ပရိတျသတျတှကွေားမှာ လှနျစှာကိုခဈြစရာကောငျးနခေဲ့ပါတယျ... Gerfield 1 မှာတုနျးက သူဟာသူ့ရဲ့သူငယျခငျြးအသဈဖွဈတဲ့ ခှေးလေးအိုဒီနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးတော့ သူငယျခငျြးတှဖွေဈလာခဲ့ပါတယျ...အဲ့နောကျမှာခှေးလေးအိုဒီကို မကောငျးတဲ့လူတှလေကျကနပွေနျလညျကယျတငျရငျးကနေ သူ့ရဲ့စှနျ့စားခနျးတှကေိုတငျဆကျပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ... အခုတငျဆကျပေးမယျ့ အပိုငျးသဈ Gerfield2မှာတော့ ခှေးလေးအိုဒီအပွငျ သူ့နဲ့ရုပျခငျြးလုံးဝတူနတေဲ့ ကွောငျဘုရငျ Gerfield Prince နဲ့ထပျမံတှဆေုံ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ... သူတို့နှဈယောကျဘယျလိုတှဆေုံ့ပွီးတော့ ဘယျလိုတှစှေနျ့စားမှု့တှလေုပျကွမလဲ... ဘယျလိုဟာသတှထေညျ့သှငျးရိုကျကူးထားလဲဆိုတာကတော့ အားလုံးစိတျဝငျတစားနဲ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ...အားလုံးကွညျ့ပွီးကွတဲ့ကားဟောငျးလေးပမေယျ့ ''Old but Gold''ဆိုတဲ့စကားအတိုငျး ပွနျလညျသိမျးဆညျးထားခငျြသူမြားနဲ့ မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိတျသတျမြား ကွညျ့ရှု့နိုငျရနျအတှကျသာဖွဈပါတယျ... Gerfield ကတော့ ကြှနျတော့အကွိုကျဆုံးဇာတျကောငျဖွဈလို့ Gerfield 1 ကို ကိုယျတိုငျဘာသာပွနျခဲ့ပွီး အခု ညီငယျ Pyae Phyo Hein ရဲ့ ဘာသာပွနျမှု့နဲ့ Gerfield2ကိုအားလုံးကွညျ့ရှု့နိုငျရနျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ.... -------------------------------------------------------------- ဒီကားလေးကတော့ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Gerfield 1 ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ Gerfield2ပဲဖြစ်ပါတယ်... Gerfield ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရင် အရမ်းကိုလည်ပြီးကြောင်ပါးဝတတ်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်ကြောင်ဖက်တီးကို ပြေးမြင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...သူ့ရဲ့စကားပြောဟန်တွေနဲ့ ဝနေတဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးက ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ လွန်စွာကိုချစ်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်... Gerfield 1 မှာတုန်းက သူဟာသူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ ခွေးလေးအိုဒီနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်...အဲ့နောက်မှာခွေးလေးအိုဒီကို မကောင်းတဲ့လူတွေလက်ကနေပြန်လည်ကယ်တင်ရင်းကနေ သူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်... အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် အပိုင်းသစ် ...
IMDB: 5.0/10 37,487 votes